FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA CHOWPIT - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Chowpit
Alika mifangaro mifangaro Chow Chow / Pit Bull Terrier
'Ity no fifangaroan'ny Pitbull / Chow Chow na mety ho azonao antsoina hoe Pitchow io. Grizzly no anarany ary 9 volana izy. Tena masstif izy. Manana ny Chow's izy lela manga ary ny rambony miforitra eo an-damosiny. '
Ny alika Chowpit dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Chow Chow ary ny Pit Bull Terrier . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'Spook dia niaraka tamintsika hatramin'ny naha alika azy. 3 taona izy amin'ity sary ity. Be volontany ny ankamaroany nefa mainty ny lamosiny sy rambony ary fotsy eo afovoan'ny vavony. Tiany ny mihinana ny karazan-tsakafo rehetra ary tia rano ! Ankafiziny ny mandeha an-tongotra sy milalao kilalao, azo antoka fa milalao trondro. Manana maso hazelavo volontsôkôlà maivana miaraka amina orona mainty sy volontany. Manana palitao malama izy ary alika antonony kely. Spook dia tia olona lehibe kokoa noho izy, raha tsy izany dia mimenomenona izy raha tsy ampahafantarina azy. Tiany daholo ny alika raha vao mahita ahy miaraka amin'ilay alika aloha izy. '
'Nanavotra an'i Rufie tamin'ny pound tany an-toerana izahay 5 taona lasa izay, tokony ho 6 taona izy izao. Izy dia mifangaro Pit Bull / Chow Chow. Amin'ny maha-alika alika azy dia be zotom-po sy michievious izy. Tiany ny mitsako hazo, izay nanimba ny fihinananay sy tohatra ary latabatra sasany. Hitanay fa ny kilalao ankafiziny indrindra dia gidro feno entana ary hitanay fa raha mbola mijanona mandry foana izahay dia hitsako azy ireo. Izy izao no alika mamy sy tsara fitondran-tena indrindra nananako hatrizay (indrindra satria tsy nijanona intsony izy ary tsy mahatsapa intsony ny filana mitsako zavatra foana). Mahalana izy no mivovo sy tia olona - indrindra ny ankizy. Ny zanak'olo-mpianadahy aza mametraka azy. Tiany ny mihazakazaka ao an-tokotaninay ary milalao miaraka amin'i Penny zanakay vaovao. Rehefa milatsaka ny oram-panala dia manipy oram-panala amin'ny volony izy ary manandrana misambotra azy, izay mampihomehy tokoa ny mijery azy. Izy dia tonga lafatra ho an'ny fianakaviako satria toa mpiambina izy, nefa tena milelaka fotsiny mpiditra an-tsokosoko ary mihodina ho biby. '
Mifangaro Rufie the Pit Bull / Chow Chow amin'ny taona 6
Alika mifangaro Chri Chow / Pit Bull mifangaro amin'ny 9 volana
Alika mifangaro Saddie the Pit Bull / Chow Chow amin'ny 11 volana- 'Saddie dia nanome zanak'alika kely 4 volana ho antsika. Natahotra be izy. Naharitra 2 herinandro ny hafanany ary nifidy ahy ho olombelona izy ary tena miaro ny ankohonana iray manontolo. Ny sakaizany akaiky indrindra dia ny Chief, Pit Bull manga. '
Lisitry ny Chow Chow Mix Dogs
Lisitry ny alika amerikana omby mifangaro omby
old cavalier king charles spaniel
azo atao mainty ve ny kiso
rat terrier chihuahua mifangaro alika kely amidy
tabilao lanin'ny alika kely an'ny mast mastiff
mpanao ady totohondry Dane lehibe Mix sary
inona no antsoina hoe mix retriever volamena sy poodle